हाम्रा नोट किन थोत्रा हुन्छन – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
हाम्रा नोट किन थोत्रा हुन्छन
सबैलाई थाहा छ, नेपाली नोट चाडै थोत्रा हुन्छन । किन चाडै थोत्रा हुन्छन भन्ने प्रश्नको उत्तर प्राय: ‘नेपाली प्रयोगकर्ताले कच्याककुचुक पार्ने हुनाले’ चाडै थोत्रा हुने गरेको भन्ने गरिन्छ । तर खासमा नोट थोत्रा बनाउनमा नेपाली बैंकहरुको ठूलो हात हुने गरेको छ । एउटा सचित्र उदाहरण:
निम्न फोटोमा देखिएको रु ५००को नोट एउटा प्वाल बाहेक नयाँ नै छ ।
को बदमास ले तेस्तो प्वाल पारेको होला त ?
यो प्रश्नको उत्तर निम्न फोटोले दिन्छ कि?
यो पचास हजारको एउटा बिटो हो – जम्मा १०० वटा रु. ५००को नोटहरुको बिटो । यिनीहरुलाई एकै ठाउँमा राख्न रबर ब्यान्डले बाँधिएको छ । रबरले मात्रै धान्दैन भनेर स्टेपलर पिनले पनि बाँधिएको छ – एउटा मात्रै होइन ६-६ वटा पिनले । खोल्नेलाइ सास्ती :
खोल्नेलाइ मात्र होइन नोटलाई पनि सास्ती । किन यस्तो गरेको भने यो अभागी बिटोले ६-७ वोटा बैंकको यात्रा तय गरेर आएको रहेछ । प्रत्येक बैंकले एउटा स्टेपलरको फुली झुन्ड्याएर पठाउदा रहेछन । नतिजा:
आजकाल सयौं बैंक खुलेका छन् सबै बैंकको यात्रा गरेर आइपुगेको नोटको बिटोको हालत कस्तो होला ? खर्च गर्न लायक पनि हुन्छ होला ?
पैसा संसार भरी सबै देशमा हुन्छन अन्त कतै यस्तो घाइते भएको पैसा देख्नु भएको छ ? म संग भएको एउटो अम्रिकन ५ डलरको नोट एउटा “नयाँ” रु. ५०० को नोट संगै राखेर हेरौं न त (नेपाली पैसाको भाउ घटेर यी दुइ झन्डै बराबर मुल्यका पैसा हुन):
बिचरा अम्रिकानेहरुसं स्टेपलर किन्ने पैसो नि रहेनछ, नोटाँ एउटो प्वाल छैन !
This entry was posted in Information, Nepal and tagged Bank, Bank notes, damaged note, holes in note, Nepali money, notes, US Dollar. Bookmark the permalink.
← शुष्मा कार्कीको उध्रेको चोली हेर्ने भिड – गाइजात्रामा पनि उही नाच
सिटी सेन्टरमा आगलागी – फिल्म हल भने चालु →
3 thoughts on “हाम्रा नोट किन थोत्रा हुन्छन”
हिजो मात्रै राष्ट्र बैंकबाट साटेर ल्याएको नोट [५० को] ढुसी परेको,च्यातिएको,यति काम नलाग्ने कि “कोइ लिने मादैनन”. यस्तो २-४ वर्षा अगाडी हुदैनथ्यो.”पुरानो भए पनि ,चल्ने खालको हुन्थ्यो.कमसेकम २-४ दिन.” अब त नस्ट गर्नु पर्ने स्तर को नोट “चल्ती मा”पठाऊछन् / लाग्छ अब राष्ट्र बैंक “दरिद्र भएछ”/ नोट छाप्न सकेको छैन./ नया नोट छाप्ने पैसाले पदाधिकारीहरु घर बनौदाहून आफ्नो/ “दुर्भाग्य”/
नेपाल का बैंक एक थोपा पनि काम लाग्दैन आफुले चाही च्यातेको नोट भित्र सुटुक्क हल्दिंछ हामीले दिंदा त हेरी हेरी लिन्छ
Pingback: हामीले उठाएको कुरा लागु हुने भएछ, नोटमा केरमेट �
काठमाण्डौंका चार गणेश